Xildhibaano cusub oo lagu dhaariyay Xarunta Golaha shacabka | Baydhabo Online
Al-Shabaab publicly executes two men for killing...
Ethio-Somali region releases prisoners
Xildhibaano cusub oo lagu dhaariyay Xarunta Golaha shacabka
Xildhibaano cusub ayaa shalay lagu dhaariyay Xarunta Golaha shacabka ee Magaalada Muqdisho, Xildhibaanadaasi oo bedel u noqonaya kuwa horay loogu dilay qaraxyo ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Labada Xildhibaan cusub ee lagu dhaariyay Xarunta Golaha shacabka ee Magaalada Muqdisho ayaa lagu kala magacaabaa Xildhibaan Xamze Siciid Xamze oo bedelay Allaha u naxariiste Xildhibaan Burci Maxamed Xamze oo lagu dilay weerarkii Shabaab ay ku qaadeen Hotelka Naasa Hablood ee Magaalada Muqdisho.
Xildhibaanka kale ee la dhaariyay ayaa isagana waxaa lagu magacaabaa Maxamed Aadan Qalabxoor, wuxuu bedelay Xildhibaan C/laahi Jaamac Xuseen oo isagana ku dhintay weerarkii Al Shabaab ay ku qaadeen Hotelka Ambassador ee Magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Somaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa fadhigii shalay ee Xarnta Golaha shacabka wuxuu ka sheegay in labadan Xildhibaan ee cusub ay yihiin kuwii bedelay labada Xildhibaan ee weeraradaasi Shabaabka ay ku dileen.
Mahad Cabdalla Cawad Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka dalka ayaa isagana shalay ku dhawaaqay in Baarlamaanka uu sii shaqeynaayo ilaa dalka uu ka yeelanaayo Baarlamaan cusub oo bedeli doona midka hada shaqeeya.
Dhawaan ayaa la filayaa dalka inay ka dhacdo doorashada Madaxtinimada iyo mida Xildhibaanada Baarlamaanka dalka, iyadoo xubnaha Baarlamaanka mid waliba uu xusul duub ugu jiro sidii uu uga mid noqon lahaa Baarlamaanka cusub ee imaan doona.
Raggii weeraray nawaaxiga Madaxtooyada oo ku labisnaa tuutaha cusub ee guutada…
Falalka argagixisadu ma hor istaagi doonaan dadaalka dowladda ee horumarinta dalka
Madaxweyne Farmaajo oo si heer sare ah loogu soo dhaweeyay